Samee naftaada foornada beerta Dareenka farshaxanka - fikradaha guriga iyo beerta
Samee naftaada foornada beerta
22.07.2014 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Geeska bannaanka, Beerta, Guriga iyo beerta, Samee naftaada
Ma sahlan tahay inaad sameysato foornadaada? Dhab ahaantii, sameynta goobo-dabeed iyo dhammaan noocyada dabka-shiddada waa farsamo ay leedahay qarsoodiyado u gaar ah iyo tafaasiishooyinka uu soo diray macallinka tababarayaasha. Si kastaba ha noqotee, marka ay timaado qolka gubashada, waxyaabaha ayaa ka fudud. Gaaritaanka fikradda lagu soo bandhigay beerta ayaa ah dadaal ay si guul leh u fulin karaan kuwa aan xirfadleyaasha ahayn. Foomka waa la buuxin karaa ama waa la iibsan karaa. Dabcan, maqnaanshaha aqoonta ku saabsan dhismaha qaab dhismeedka, waxaa lagama maarmaan ah in la raadsado caawimaadda khabiirada. Xulashada agabku sidoo kale waa in si wanaagsan loogala tashado, laakiin asal ahaan, foornadaani waa fikrad si fudud loo meel-mari karo isla markaana dhammaan suxuunta ku diyaarsan ayaa kaa farxin doonta carafkeeda.
Sida soo jeedinteena Beerta BeertaQaara, tiro tafaasiil ah waa in xisaabta lagu darsadaa oo ugu muhiimsan, kana fog agabyada guban kara. Haddii aad haysato qulqulka joogtada ah ee goobta dhismaha, waa macquul in furitaanka foornadu ay is barbar dhigto, laakiin tani muhiim ma ahan.
Qorsheynta shaqo ee wanaagsan waa sirta guusha. Markaad aragto khaladaadkaaga kahor intaanad samayn waxay kuu badbaadin doontaa lacag iyo waqti. Ma jiro qorshe kaamil ah iyo mid caalami ah. Markii wax la dhisayo waxaa jira kumanaan faahfaahin ah oo u baahan in xisaabta lagu daro. Taasi waa sababta aan ku siin doono fikradda iyo faahfaahinta qaar, inta soo hadhayna waxaad u baahan doontaa inaad geliso shaqada iyo fikirka hal abuurka. Cabbirka foornada ayaa ugu muhiimsan. Waxay sidoo kale qeexaan shaqadooda, ie. waxa lagu dubay ama ku qiiqi doona.
Marka hore go’aami dhexroorka garaac (G) iyo dhirirkiisa (E). Iyaga oo ku xidhan iyaga, cabbirrada dibedda ee qaabdhismeedka taageera (A, B, C, D) iyo dusha sare ee qiiqa qiiqa (F) ayaa sidoo kale la go'aamiyaa. Sidoo kale xisaabi cabbiraha iyada oo aan xirneyn (a iyo b), haddii aad saadaalinayso mid, iyo sidoo kale nooca iyo qeybta loo baahan yahay isku xirnaanta (c) iyo dhumucda dhabta ah ee walxaha (d). Waa suurad wacan in qiiqa chimney uu ugu yaraan yahay 50% ka sareeya foornada, ama haddii dhirirka (E) uu yahay 50cm, markaa qiiqa waa inuu ahaadaa mid sare (F) ugu yaraan 75cm (salka). Ballaca iyo dhirirka furfurka / qulqulka furitaanka (e iyo f) waa inuu doorbidayaa ugu yaraan 50% dhererkiisa (E). Isbeddellada qaabka iyo cabirka ayaa suurtagal ah, maadaama tan inta badan lagu tiirsan yahay albaabada, isla markaana loo maareyn karo gubashada. Iyaga, dhinaca kale, waxay ka fogeeyaan qolka gubashada jirka qiiq-ka-sooca, iyaga oo abuuraya jawi xiran.
Xullo aasaaska qalabka dhismaha oo xisaabi tirada aad u baahan tahay.
Dhismaha noocan ah, wuu ka duwan yahay Beerta lagu dubto Beerta, waxaa lagu talinayaa in la sameeyo lugo, maxaa yeelay culeyska guud wuxuu sababi karaa inuu dhaco ama wareemo. Ku shub saldhiga xoojinta ee xoojinta oo u oggolow inuu adkeeyo. Waxay dul saartaa alwaaxda ama lebenka saddexda darbadood ee taageersan, ku dheji qaab-dhismeedka oo ku shub wejiga labaad ee la xoojiyay. Ka dib markii ay engejiso, sawir, diyaarso, oo hagaajiso salka mustaqbalka foornada. Adeegso lebenka u adkaysan kara kuleylka. Dhisaan googo-koob oo ah bir leben adag oo hareerahooda ah, adigoo qolka uga baxaya godka. Iyaga, xagal (si loo gaadho qaab wareegsan) safka xiga. Waxaa lagugula talinayaa, markaad gaarto safka labaad ama seddexaad, inaad qaabeeyso furitaanka furitaanka. Tani badanaa waxay kuxirantahay albaabka ama albaabka la xushay. Sidoo kale way fiicantahay in la diyaariyo baakado qaro weyn ama shaashad styrofoam leh qaabka iyo qaanso-garaaca hemisphere. Waxaad awoodi kartaa inaad kaga tagto gudaha foomka si ay kuugu hagaan sidaad wax u dhiseysid halka aad tageereyso hoyga. U shaqee si tartiib ah oo farsamo ahaan; u dhaaf waqti ku filan oo adkayn wax kasta. Markaad dhameyso foornada oo isku dhafka ayaa ah mid adag, waxaad awoodi doontaa inaad jabiso qaabkan oo aad ku jiiddo godka. Ka qaad farqiga daloolka ku saabsan 1 / 2 ballackiisa banaanka hemisphere, adigoo ugaga tegaya god qiiq. Waa in loo meeleeyaa sida in marka furitaanku xiran yahay, qolka gubashada uusan heli karin ogsijiin. Badanaa, lakab dibadeed, lakab dheeri ah oo dhejis ah oo ah dariiqyo, dhagaxyo, dhoobada iyo xitaa qurxinta farshaxanka leh muraayadaha muraayadaha ama terracotta marmarka ayaa badanaa la bixiyaa. Markay wax waliba diyaar yihiin, u oggolow in aad qalajiso gebi ahaanba ilaa hal toddobaad oo foornadaada shid.
beerta, foornada Pizza beerta, foorno dabeed, xero ku taal dayrka, fikradaha, fikradaha beerta, fikradaha dayrka, fikradaha guriga, fikradaha guriga, fikradda foornada, qiiqa qiiqa, samir samayso, naftaada foorno ka dhig, naftaada samee, goobta dabka lagu shito qiiqa, foorno, foornada beerta dhexdeeda, foornada dayrka, foornada pizza, foornada foornada, Shiinka qiiqa, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Gudaha ayaa cad maxaa yeelay waa casri
Caddaan waxay ku soo jiidataa nadiifinteeda iyo jilicsanaanteeda. Gudaha gudaha cad waxay jilcisaa khadadka, waxay abuurtaa ...
Miiska qurxinta sanadka cusub
Qaar ka mid ah fikradaha wanaagsan ee ku saabsan sida loo abaabulo oo loo diyaariyo miiska Sannadka Cusub. Abuur alaab ...
Sanadihii la soo dhaafay, midabka cas wuxuu ahaa mid ilaa hadda socda oo si xoogan loogu metelay qaabeynta casriga ...
Naftaada u dhig sariir naxaas ah oo iftiin leh
Waxaan si isdaba joog ah ugu taabagelnay mawduuca sameynta alaabta guriga, laakiin halkan waxaan ku tuuraynaa mid cusub oo ...
Xabadaha shukulaatada oo leh geedo shukulaato
Fikrad fiican oo cusub oo loogu talagalay dhadhanka tufaaxa macaan ee lagu rumeeyay shukulaatada. Isku-darkaan ...
Cirridka cherry ee macaan iyo caafimaadka
Xilliga cherry, fikrad kasta oo cunto ah oo leh mirahaan waa caafimaad iyo macaan ...
Mashruuc guri alwaax qurxoon oo casri ah leh gogol
Kani waa mashruuc aad u nadiif ah oo casri ah guri alwaax ah oo leh qol waasac ah iyo m ...
Raadi galka - Xulo bisha - Sebtember 2020 Luulyo 2020 Juun 2020 2020 Abril 2020 Maarso 2020 Febraayo 2020 Janaayo 2020 Diseembar 2019 Nofeembar 2019 Oktoobar 2019 Sebtember 2019 Agoosto 2019 Luulyo 2019 Juun 2019 2019 Abril 2019 Maarso 2019 Febraayo 2019 Janaayo 2019 Diseembar 2018 Oktoobar 2018 Sebtember 2018 Agoosto 2018 Luulyo 2018 Juun 2018 2018 Abril 2018 Maarso 2018 Febraayo 2018 Janaayo 2018 Diseembar 2017 Nofeembar 2017 Oktoobar 2017 Sebtember 2017 Agoosto 2017 Luulyo 2017 Juun 2017 2017 Abril 2017 Maarso 2017 Nofeembar 2016 Luulyo 2016 Juun 2016 2016 Abril 2016 Maarso 2016 Janaayo 2016 Diseembar 2015 Nofeembar 2015 Oktoobar 2015 Sebtember 2015 Agoosto 2015 Luulyo 2015 Juun 2015 2015 Abril 2015 Maarso 2015 Febraayo 2015 Janaayo 2015 Diseembar 2014 Nofeembar 2014 Oktoobar 2014 Sebtember 2014 Agoosto 2014 Luulyo 2014 Juun 2014 2014 Abril 2014 Maarso 2014 Febraayo 2014 Janaayo 2014 Diseembar 2013 Nofeembar 2013 Oktoobar 2013 Sebtember 2013 Agoosto 2013 Juun 2013 2013 Abril 2013 Maarso 2013 Febraayo 2013 Janaayo 2013 Diseembar 2012 Nofeembar 2012 Oktoobar 2012 Sebtember 2012 Agoosto 2012 Luulyo 2012 Juun 2012 2012 Abril 2012 Maarso 2012